ဒုက္ခသည်လက်မခံနိုင်ကြောင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ပြောဆို မြန်မာနိုင်ငံကနေ နယ်စပ်ကျော်ပြီး ရောက်ရှိလာကြတဲ့ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကို လက်ခံခိုလှုံခွင့်ပြုဖို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအစိုးရကို ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး UNHCR က တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့် လူနေအိမ်များ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကြိုဆို
Patriotic Man နေရပ်-
NO ROHINGYAR ! No CHINESE! (Never Our CitiZen)NEVER NEVER!!!!!
Jun 14, 2012 02:21 PM
Every religion have bad Man & Good Man,
And Every Religion have Devil & God ,Thus We should don't to say Other Religion.
ကယ်တင်ရှင်.ကျေးဇူးရှင် နေရာဝင်ယူမယ့် တရုတ်ကြီးကို ရခိုင်သားတွေ အလိုမရှိ အလိုမရှိ
Jun 13, 2012 02:00 PM
Jun 13, 2012 04:45 AM